Shil ka dhacay Duleedka Laas-Caanood - Awdinle Online
Shil ka dhacay Duleedka Laas-Caanood
November 5, 2019 (AO) – Hal Ruux ayaa geeriyooday Afar kalena waa ay dhaawacmeen,kadib markii gaari yar oo ay wateen uu kula dhacay togga loo yaqaanno WAQA-DERI oo dhanka koonfur ka xiga magaalada Laascaanood ee Xarunta gobolka Sool.
Gaariga Shilka galay ayaa ka yimid degaanka DOCMO ee koofurta gobolka Sool, waxaana uu ku sii jeeday magaalada Laascaanood,Iyada oo ay saarnaayeen 5 Ruux oo uu mid kamid ah geeriyooday.
Qaar kamid ah dadka ku nool Magaalada laas-Caanood ee Xarunta Gobolka Sool ayaa gurmad u sameeyey dadka uu gaariga toga kula dhacay, iyada oo haatan uu socdo qorsho lagu soo bixinaayo gaariga.
Afarta Ruux ee Shilkaasi ku dhaawacantay ayaa Goobjoogayaal waxaa ay sheegeen in lagu daweynaayo isbitaalka Laascaanood,hayeeshee mid kamid ah dhaawacyada ay xaaladiisa liidato.
Wararka ayaa waxaa ay intasi ku darayaan in Ruux dhaawaciisa uu liito ee Shilka ku dhaawacmay la geyn doono Isbitaalka Magaalada Hargeysa sida ay sheegeen Eheladiisa.
Si kastaba Shilkan ka dhacay duleedka Koonfureed ee Magaalada laas-Caanood ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli xalay duleedka Magaalada Boosaaso uu ka dhacay Shil Gaari oo geystay dhimashada hal Ruux iyo dhaawaca Afar kale.
Previous articleCiidamo Al Shabaab ah oo lagu arkay Degaano hoos yimaada Guriceel
Next articleHoggaamiyaha Wadajir “Ahlusunna horay ayaan uga dignay”